Phupha malunga nomyinge Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama "isiganeko" linokuthetha izinto ezahlukeneyo kakhulu. Ngaphambi kokuba kubekhona iimpawu zendlela, oko kubizwa ngokuba ziimayilest bekusebenza njengophawu lomgama. Njengoko igama lisitsho, yayililitye eliqingqwe ngobume bekholamu kwaye liqulathe ulwazi lomgama olufana noko sikufumanayo namhlanje kwiimpawu eziqhelekileyo zendlela. Iimpawu zomhlaba ezisaseleyo namhlanje ziphantsi kokhuseleko lwezikhumbuzo.
Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi, isiganeko esibalulekileyo sinxulunyaniswa nomsitho othile. Oku kunokuba yimicimbi ebalulekileyo yezembali, umzekelo. Okanye impumelelo yophando lwezonyango ngoku ethembisa ukunyanga abantu abaninzi abagulayo. Kodwa mhlawumbi kwanamanyathelo okuqala awathatyathwa lithole lodwa ngaphandle koncedo lukanina.
Ke ngoko, isiganeko esibalulekileyo inokuba sisiganeko sehlabathi okanye umntu ngamnye. Kwakhona ukutolikwa kwamaphupha, uphawu lwephupha "olubalulekileyo" lufihla ngaphezulu kwesiqalo.
1 Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolika ngokomoya
Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba sibona isiganeko esibalulekileyo kumaphupha ethu aphoswa endleleni yethu, oku kunokuthetha ukuba kubomi bethu bokuvuka ukuba imicimbi yangoku ingajika ibe sisiphithiphithi esikhulu. Oku kunokubangelwa kukusilela kwe Izakhono zombutho ubuxoki obuphuphayo.
Kwelinye icala, kunokubakho iimpembelelo zangaphandle eziphazamisa izicwangciso zethu. Kule meko, umxholo wephupha unokukhuthaza umntu ophuphayo ukuba acinge. Mhlawumbi kubhetele ukuthatha ikhondo elahlukileyo. Unokukufumanisa kulula ngakumbi kwaye kumnandi ngakumbi kunendlela ebicwangcisiwe.
Ukuba umntu uhamba kwinqanaba eliphambili kwimeko yephupha okanye umbona emi endaweni ethile kude, oku kunokuba ngokweetoliki zamaphupha duda khomba emsebenzini okanye kubomi bothando.
Kuya kufuneka uphinde ube namava amaphupha anje isilumkiso Qonda ukuba akufuneki umamele amarhe asasazwa ngabanye abantu. Ukuba umntu othile ukucela ukuba uboleke into kwixa elizayo, siyakucebisa ukuba ungakwenzi oko, kuba kuya kufuneka ulinde ixesha elide ukufumana imali mboleko.
Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwasemaphupheni, umfanekiso obalulekileyo "wephupha" obizwa ngokuba yi Comenzando enye Inxalenye yobomi ijongiwe. Oku kunokuba yinto ebalulekileyo yengqondo umntu aphupha ngayo.
Imeko yamaphupha inokuba yeyomntu ngamnye. Kuba umntu ngamnye unemihla ethile okanye amava akhe, endiya kuwachaza njengeziganeko ezibalulekileyo ebomini bakhe. Kungcono ukuzama ukubuyela el mundo yamaphupha akho kwaye ukhumbule iinkcukacha.
Zeziphi iimvakalelo ozive ngexa lephupha kwaye mhlawumbi bezikhona ezinye iisimboli zephupha ekufuneka zithathelwe ingqalelo kutoliko? Amanqwanqwa abalulekileyo, esiwabona enjalo ephupheni, anokusinika imikhondo enomdla malunga nokuzayo ebomini bethu.
Isimboli yephupha «isiganeko» - ukutolika ngokomoya
"Imbalasane" yomfanekiso wephupha iphawula enye ekuchazeni iphupha lokomoya icandelo kwindlela yobomi yokufunda kunye nokukhula ngokomoya.